mairie-antananarivo – Famoriana mpanao gazety teny amin’ny boriborintany faharoa
auteur 21 febroary 2017 Commentaires fermés
Namory mpanao gazety ny delegen’ny boriboriborintany faharoa, Andriamatoa RAZAFINDRABE ny Alatsinainy faha-20 ny volana febroary taona 2017. Voalaza tamin’izany : ny ezaka atao fanafoanana ny fananganana trano tsy ara-dalàna. Eo ihany koa ny fanavaozana ny sisin-dalàna izay natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Ny fanamboarana fotodrafitr’asa fametahana afisy. Mitohy ihany koa ny ezaka amin’ny fampidirana ny mpivarotra amoron-dalàna any anaty tsena izay efa manomboka tsy misy intsony eny amin’ity boriborintany ity.
Marihina fa mifandraika amin’ny Oniveristen’Antananarivo avokoa ny ankabeazan’ny foto-drafitr’asa eny amin’ny amin’ny firaisana faharoa. Efa miantomboka ny fanavaozana ny tsena eny Ankatso raha ny voalazan’ny delege. Tsy ho foanana akory io tsena io fa ezahina tsy atao manelingelina ny fifamoivoizana sy ny mpandeha an-tongotra. Mahakasika ny tsena rehetra dia efa nisy fivoriana ny alakamisy lasa teo teny amin’ny boriborintany faharoa ary notohizana ny Zoma tao amin’ny lapan’ny tanàna.
Voadinika tao tamin’izany ny lamin’asa rehetra hanatsaràna ny tsena eny amin’ny boriborintany faharoa. Tena nohamafisin’ Andriamatoa RAZAFINDRABE Jacques nandritra ny dinidinika natao tamin’ny mpanao gazety fa maro ny manenjika azy, voaendrikendrika ho manao risoriso amin’ireo mpivarotra sasantsany izy, nohamafisiny fa tsy marina anefa izany fa tsaho fotsiny ihany. Ezaka amin’ny fanatsaràna hatrany ny boriborintany iandraiketany no tena imasoany.
Marihina fa hita ho tena mivoatra ny boriborintany faharoa ankehitriny : efa miha-tony ny fandriampahalemana, manomboka tsy hita ny mpivarotra amoron-dalàna, madio sy milamina ny tanàna. Ary hatramin’ny ny fotoana niavian’ny orana dia tsy nisy aloha hatreto ny loza voajanahary izay tena maro tokoa teny amin’ity boriborintany ity. Izany rehetra izany dia vokatry ny asa sy ny ezaka nataon’ny tomponandraikitra.